China Asynchronous Geared Elevator Traction Machine THY-TM-YJ140 orinasa sy mpamatsy | Tianhongyi
Masinina mitaingina haingam-pandeha tsy miovaova THY-TM-YJ140
Fampiatoana: 1: 1
Max.Static Load: 2800kg
Novakiny DZE-8E: DC110V 1A / AC220V 1.2A / 0.6A
Fampiatoana 1: 1
Max.Static Load 2800kg
Novakiny DZE-8E DC110V 1A / AC220V 1.2A / 0.6A
3. Karazana: Masinina mihetsiketsika THY-TM-YJ140
4.We dia afaka manome milina fanamafisam-peo synchronous sy asynchronous an'ny TORINDRIVE, MONADRIVE, MONTANARI, FAXI, SYLG ary marika hafa.
Ny masinina fanamafisam-peo tsy misy ifandraisany an'ny THY-TM-YJ140 dia manaraka ny fitsipika mifandraika amin'ny fenitra TSG T7007-2016, GB 7588-2003, EN 81-20: 2014, fenon'ny EN 81-50: 2014. Ny maodelin'ny frezy mifanaraka amin'ny masinin-tsolika dia DZE-8E. Mety amin'ny ascenseur mpitatitra entana miaraka amina 400KG ～ 500KG, mampiasa karazana reducer worm, ny kankana dia 40Cr, ary ny fitaovana kodiarana kankana dia ZCuAl10Fe4Ni2Mn2. Ny masinina dia mizara ho ambony havia sy miankavanana, ary ny fomba fametrahana dia misy ny fametrahana vertikal sy ny fametrahana marindrano. Ho an'ny motera misy herinaratra ≥ 7.5Kw, ny frezy dia fitaovana ampientam-po ary ny AC220V no manome ny valiny. Ny mpampiasa dia tsy mila afa-tsy fanaraha-maso malefaka tokana. Ny milina fanamafisam-peo dia misy fitaovana mpanohitra mitsambikina tariby. Aorian'ny fametrahana ny tady tariby dia ahodino ny toeran'ny fitaovana manohitra ny hitsambikina mba hahazoana antoka fa tsy tokony hihoatra ny 1.5mm ny elanelana misy eo amin'ny tadin'ny tariby sy ilay fitaovana anti-jump. Ny milina fampidirana ascenseur tsy misy ifandraisany dia mitaky encoders isan-karazany ho an'ny inverters samihafa, ary ny mpanjifa dia afaka misafidy mifanaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso azy ireo. Mety amin'ny tontolon'ny asa anaty.
Ny frein dia ampahany lehibe amin'ny milina fanamafisam-peo. Ilaina ny manamarina ny fiasan'ny frein matetika. Amin'ny ankapobeny, ny vanim-potoana fizahana dia tsy tokony hihoatra ny iray volana. Rehefa manao fanaraha-maso sy fanamboarana dia mila miantoka ianao:
1. Ny asa fikojakojana rehetra dia tsy maintsy miantoka ny fanatanterahana ny ascenseur raha sendra misy tsy fahampian'ny herinaratra, ary tokony ho azo antoka fa tsy azo atomboka tsy nahy ny ascenseur;
2. Mandritra ny fanitsiana ny rafitry ny frein, dia tsy misy tselatra enta-mavesatra ampiharina amin'ny kodiarana na moto;
3. Aorian'ny fizahana sy fikojakojana dia jereo raha mihidy daholo ireo singa mifandraika sy mihidy, ary ampifanaraho amin'ny torque fanamafisam-peo ampy mifanaraka amin'ny fepetra takiana ampiasaina alohan'ny ahafahan'ny rafitra ascenseur manohy miasa;
4. Ny faritra fikororohana rehetra dia tsy tokony voaloton'ny diloilo.
Ny fomba fanovana manokana ny frein:
1. Fanitsiana ny hery fanidiana: vahao ny voanjo 1 amin'ny faran'ny lohataona lehibe mba hahatonga ny lohataona amin'ny fanjakana malalaka, sintomy ny voanjo 1 mba hahatonga ny fihary lohataona 2 hanakaiky ny faran'ny loharano, ary avy eo ampifanaraho ny voanjo 1 ka mahazo hery Braking ampy.
2. Fanitsiana ny elanelam-baravarana misokatra: manome hery ny frein, ampiasao fatra fandrefesana mba handrefesana ny elanelana misy eo amin'ny kiraro frein 3 sy ny velaran-tohatra roa an'ny kodiarana vaky aorian'ny fanokafana ny frein mba hahazoana antoka fa ny elanelana misy eo amin'ny kiraro sy ny roa ny velaran'ny arofenin'ny kodiarana dia 0,1-0,2mm (amin'ny fotokevitra dia tsara ny manome toky fa tsy misy fifandirana eo amin'ny kiraro sy ny kodiarana rehefa manokatra ny vaky). Rehefa kely loatra ny elanelana fanokafana dia tokony avadika familiana arakaraka ny famantaranandro 4, raha tsy izany dia hitombo ny banga. Rehefa ahitsy amin'ny toerana mety dia ampiasao ny voanjo 5 hanidiana mafy ny visy 4. Avereno jerena raha mahafeno ny fepetra takiana ny fikorontanana tsy miasa ataon'ny frezy.
3. Ny fanitsiana ny fampifanarahana fanokafana: ny fomba dia mitovy amin'ny an'ny YJ150.
Teo aloha: Miorina maharitra Magnet Synchronous Gearless Traction Machine THY-TM-K300
Manaraka: Masinina mitaingina haingam-pandeha tsy miovaova THY-TM-YJ150
Masinina fampandrenesana ascenseur
Motor amin'ny herisetra
Elevator mitaingina mitaingina
Elevator mitaingina Gearless
Elevator amin'ny fidirana an-trano
Fiakarana Sheave Elevator
Elevator Counterweight Frame Ho an'ny Trac samihafa ...
Governora miverina ho an'ny ascenseur mpandeha miaraka amin'ny Mac ...
Double Moving Wedge Progressive Safety Gear THY ...
Fehin-kibo fanamafisam-peo miompana amin'ny Elevator
Elevator Gearless & Gearbox Traction Machine ...